Puntland oo ka hortagaysa bannaanbaxyo | KEYDMEDIA ONLINE
Puntland oo ka hortagaysa bannaanbaxyo
Dowlad goboleedka Puntland ayaa billowday qorshe ay uga hortageyso Bannaanbaxayaasha careysan ee maalmahan isku soobaxa ka dhigayay degaanno ka tirsan Puntland
BOOSAASO, Soomaaliya - Amar kasoo baxay Madaxtooyada Dowlad Goboleedka Puntland ayaa lagu joojiyay isku soobaxyada, waxaana lagu sababeeyay xaaladda soo laba-kacleynta Caabuqa Covid-19 oo kusii baahaya gobollada maamulkaasi ka arrimiyo.
Ciidamo dheeraad ah ayaa lagu daadiyay waddooyinka iyo goobo kale oo muhiim ah bartamaha magaalada Boosaaso, si ay uga hortagaan bannaanbaxyada looga soo horjeedo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. bulshada ku dhaqan magaalada ayaa looga digay in ay sameeyaan isu soo bax, qofkii lagu qabto maamulku waxa uu sheegay in uu maxkamadeynayo, maadaama amarka lagu joojiyay isku soobaxa uu salka ku hayo ka feejignaanta faafitaanka Caabuqa Covid-19 oo si xoog leh ugu soo laba kacleeyay guuud ahaan adduunka oo dhan gaar ahaan waddanka Soomaaliya.
Magaalada Boosaaso waxaa horay uga dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo khudbaddii madaxweyne Deni ka jeediyay xarunta PDRC ee Garowe iyo sidoo kale kuwo lagu muujinayo diidmada lacagta Shilin Soomaaliga oo ka joogsatay guud ahaan degaannada Puntland.
Tallaabadan ayaa loo arkaa caburin xorriyatul-qowlka ah, waxaana sidan oo kale sameeyay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo oo xabad u adeegsaday isku soo bax la doonayay in laga dhigo magaalada Muqdisho kaasoo looga soo horjeedo xukun jaceylkiisa iyo keli-talisnimadiisa.